လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေမယ့် ညဈေးပေါင်မုန့်ဆိုင်ဖွင့်ပါပြီ ! - JAPO Japanese News
လာ 11 Jan 2021, 17:03 ညနေ
တိုကျိုရှိ Kagurazaka ။
အကယ်၍ ဘူတာရုံမှတောင်ကုန်းကိုတက်သွားလျှင် စားသောက်ဆိုင်များတန်းစီနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လမ်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါ Kyoto ကဲ့သို့ထူးခြားသည့်လှပသောမြို့တစ်မြို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။တောင်ထိပ်မှာတိုက်ခန်းတွေရှိပြီးတော့ အဲဒီမှာ လူအများအပြားနေပါတယ်။ထိုမြို့တွင် ထိုကဲ့သို့သောဆိုင်များသည်ညအချိန်တွင်သာပေါ်လာကြပါတယ်။
ဆိုင်နောက်ကွယ်မှရှပ်တာပိတ်ကာရှိနေတာကတော့ စာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာအုပ်ဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက် eaves ကိုငှားပြီး အရှေ့မှာဆိုင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ပေါင်မုန့်များသည်ရိုးရှင်းသောစားပွဲပေါ်မှာတန်းစီလိုနေပါတယ်။ မီးအိမ်များကိုလည်းအလှဆင်ထားပါတယ်။
ဤပေါင်မုန့်ဆိုင်က Big Issue Japan လို့ခေါ်တဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က Big Issue လို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းကိုရောင်းပါတယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းကိုမင်းသိလား?စာအုပ်တစ်အုပ်မှာယန်း ၄၅၀ ဖြစ်ပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူတွေကမြို့ထဲမှာရောင်းကြပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ကဤအရာများထဲမှတစ်ခုကိုရောင်းချပါက အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူများအတွက် ယန်း ၂၃၀ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးအိမ်မဲ့သူများအတွက်တောင်မှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပြီး ညပိုင်းပေါင်မုန့်ဆိုင်ကတော့ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဤ Corona ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အပြင်ဘက်၌လမ်းလျှောက်သူ ဦး ရေလျော့နည်းသွားပြီး မဂ္ဂဇင်းများရောင်းအားလည်းကျဆင်းလာပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ မြို့ရှိပုံမှန်စားသောက်ဆိုင်များကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် နောက်ဆုံး၁ခုကိုရောင်းရသည့်အထိ ဆိုင်မဖွင့်နိုင်ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို ၀ယ်ယူအားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အစားအစာဆုံးရှုံးမှုဟုခေါ်သော ဤအစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၆ သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ ကုန်တင်ကားကြီး ၁၇၀၀ စာလောက်ရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် ၁.၃ ဘီလီယံတန်ချိန်ရှိပါတယ်။အချို့လူများက အစာမစားရဘဲသေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့က ဤဆုံးရှုံးမှုကိုမည်သို့လျှော့ချရမည်နှင့်အတူတူပင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ လူအများစုကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိတ်မုန့်ထဲမှာပေါင်မုန့်ဟာအရသာရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာအလုပ်ပြီးနောက်အိမ်ပြန်ဖို့နောက်ကျသွားပြီ။ထို့ကြောင့်ကိတ်မုန့်ဆိုင်တွေကိုမကြာခဏပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒီညပိုင်းပေါင်မုန့်ဆိုင်က ၁၉:၃၀ ကနေစပြီးဖွင့်ပါတယ်။ရောင်းကုန်သွားသည့်အခါမှဆိုင်ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံမဟုတ်သောကိတ်မုန့်ထုတ်ကုန်များလည်းရှိလို့ အရသာရှိသောပေါင်မုန့်အမျိုးမျိုးကို စမ်းပြီးစားသုံးခြင်းကလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။
အရောင်းအ၀ယ်ကနေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာလည်းဖြစ်လို့ လူတိုင်းကပျော်ရွှင်ကြမှာပါ။ကောင်းတာမကောင်းတာတွေထက် လူနေမှုပုံစံစသည်တို့သည်လည်း Corona ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရမှာပါ။
Corona ပြဿနာပြီးဆုံးသောအခါမှာတော့ သင့်ရဲ့မူလဘဝနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသောဘဝမျိုးမှာ သင်အခြေချနေနိုင်ကောင်းနေမှာပါ။ ထိုသို့ဆိုသော်လည်း စိတ်အေးရပြီးလားဆိုရင်ကတော့ စိတ်မသက်မသာ ညည်းတွားနေလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။
Corona မတိုင်မီ အနည်းငယ်ထူးဆန်းမှုတွေဖြစ်လာတော့မည့်ကမ္ဘာကြီးအတွက် ဒါကိုပြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အချိန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးများတောင် ထိုင်ငိုသွားရမယ့် six-pack နှင့်ဝက်ဝံလေးများ
ဂျပန်မှာ ခရစ္စမတ်ကို ဘယ်လိုကျင်းပကြသလဲ?
မုန်တိုင်းအသစ် နံပါတ် (၁၄)၊ အိုကီနာဝါဘက်ကို ချဥ်းကပ်လာနိုင် !!!